बाँच्न ठाउँ कसरी पाउन | USAHello | USAHello
बाँच्न ठाउँ कसरी पाउन
तपाईं बाँच्न ठाउँ देख रहे? संयुक्त राज्य अमेरिका मा आवास अक्सर महंगा छ. यो एक सुरक्षित छिमेकी बस्न राम्रो ठाउँ पाउन गाह्रो हुन सक्छ. तपाईं पनि बाँच्न ठाउँ कसरी पाउन द्वारा भ्रमित हुन सक्छ. यो पृष्ठ तिर्ने बिल बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ, नजिकै छिमेकी जीवित, र घर स्वामित्व.
आफ्नो घर एक महत्वपूर्ण स्थान छ. त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक कहावत छ: “जहाँ हृदय घर हो।” हामी बाँच्न स्थानहरू - - यो हाम्रो भौतिक घरमा मतलब मानिसहरू र कुराहरू हामी प्रेम प्रतीक. धेरै शरणार्थी आफ्नो नयाँ घरमा गर्व. सुरक्षित भइरहेको, बाँच्न सहज ठाउँ संयुक्त राज्य अमेरिका घर जस्तै महसुस बनाउन मदत गर्नेछ. शरणार्थी आवास आवश्यकता प्रत्येक परिवारको लागि अलग, तर छनौट गर्न घरमा को विभिन्न प्रकार छन्.
आवास को प्रकार
बाँच्न ठाउँ भाडामा लिने गर्न
संयुक्त राज्य अमेरिका मा होम्स अपार्टमेन्ट हुन सक्छ (ठूलो भवन को एक आत्म-समावेश भाग) वा एकल घर. तपाईं एक घर भाडामा, तपाईं मालिक हरेक महिना रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ. तपाईं एक पट्टा हस्ताक्षर गर्नेछ, जो प्रत्येक महिना आफ्नो भाडामा र अन्य बिल भुक्तानी गर्नेछ भन्छन् कि एउटा सम्झौता हो.
एक घर वा अपार्टमेन्ट साझेदारी
साझा आवास तपाईं अमेरिका कल के एउटा घर वा अपार्टमेन्ट भाडामा अर्थ roommates - एउटै घरमा वा अपार्टमेन्ट तपाईं र तपाईंको परिवारको साथ बाँचिरहेका अन्य. यसलाई तपाईँले भाडामा र उपयोगिता को लागत विभाजित गर्न सक्नुहुन्छ अक्सर आफ्नो आफ्नै ठाउँमा भाँडामा भन्दा सस्ता छ (बिजुली, ताप आदि). सामान्यतया सबैलाई आफ्नै बेडरूम छ र तिनीहरूले जीवित कोठा साझेदारी, भान्सा र बाथरूम.
एक घर owning
संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक घर खरीद महंगा छ. जब तपाईं एक घर किन्न, तपाईं सामान्यतया एउटा तल भुक्तानी भुक्तानी गर्न सुरक्षित पैसा आवश्यक (घर को कुल लागत एक प्रतिशत), र त तपाईं अक्सर पैसा उधारो घर बाँकी भुक्तानी गर्न. प्रत्येक महिना के तपाईं उधारो मुद्रा को लागि बैंक आफ्नो बंधक भुक्तानी भुक्तानी. जब तपाईं एक घर किन्न, तपाईं पनि अन्य खर्च छ, सहित बीमा, कर र घर मर्मत.
भाडामा एक स्थानको लागि देख
भाडामा एउटा ठाउँ पत्ता कठिन छ. त्यहाँ सधैं किफायती भाडाको लागि प्रतिस्पर्धा धेरै छ. त्यहाँ तपाईं सीमित आय मा बाँच्न ठाउँ खोजिरहेको बेला प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ दुई आवास को प्रकार हो:
ठूलो शहर र केही साना व्यक्तिहरूलाई मा, त्यहाँ कम आय मान्छे को लागि आवास प्रदान गैर-मुनाफा र सरकारी एजेन्सीहरू छन्. दुर्भाग्यवश त्यहाँ किफायती आवास को लागि लामो पर्खाइ सामान्यतया छ. तर यदि तपाईंको क्षेत्र किफायती आवास छ, यो प्रतीक्षा सूची मा प्राप्त गर्न राम्रो छ. एक आवास परामर्श एजेन्सी तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ किफायती आवास के उपलब्ध छ. तपाईं दुवै पंख खोज गर्न सक्नुहुन्छ स्थानीय सार्वजनिक आवास एजेन्सीहरू र परामर्श एजेन्सीहरू आफ्नो क्षेत्रमा.
तपाईं पनि आफ्नो समुदायमा एक स्थानीय संगठन खोजी गर्न सक्नुहुन्छ FindHello. आफ्नो भाषा चयन, त्यसपछि आफ्नो शहर चयन. त्यसपछि “आवास & खाद्य।” भने तपाईंको समुदाय लागि केही सूचीबद्ध छ, इन्टरनेटमा खोजी. प्रकार “किफायती आवास [आफ्नो शहर को नाम].”
तिनीहरूले विज्ञापन रूपमा सस्तो निजी भाडा बित्तिकै भरिएको प्राप्त. तपाईं सबै भन्दा राम्रो सूचीकरण फेला पार्न र हरेक दिन तिनीहरूलाई जाँच गर्न आवश्यक हुनेछ. जब नयाँ विज्ञापन पोस्ट हुन्छन् केही सूचीकरण पृष्ठ सूचित गर्नेछौं. यहाँ एक सूची छ सबै भन्दा राम्रो घर भाडा साइटहरु र अनुप्रयोगहरू. वेबसाइट Craigslist भाडाको लागि सबैभन्दा प्रयोग साइट हो. तर Craiglist मा, के तपाईं धोखा प्रयास मान्छे को सावधान छ. विज्ञापन केही शङ्कास्पद छन्. कहिल्यै अनलाइन कसैलाई पैसा वा व्यक्तिगत जानकारी पठाउन. के तपाईं एउटा सम्झौता छ सम्म भाडामा तिर्नुपर्छ कहिल्यै.
तपाईं शायद आफ्नो आफ्नै ठाउँमा भाडामा चाहनुहुन्छ, तपाईं बस एक व्यक्ति भन्दा बढी हो, विशेष गरी यदि. तर अक्सर तपाईं एक घर वा अपार्टमेन्ट साझा विचार भने कतै फेला एक राम्रो मौका हुनेछ. जहाँ किराए धेरै उच्च छन् यो विशेष गरी ठूलो दिछन साँचो छ. साझेदारी मतलब बस भाडामा साझेदारी छैन, तर अन्य काम वयस्क सबै अन्य लागत साझेदारी. तपाईं साझेदारी गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, तपाईं वास्तवमा nicer ठाउँमा अन्त हुन सक्छ, थप स्थान वा एक यार्ड संग, roommates तपाईंलाई बडा केहि किन्न सक्छन् किनभने.
भाडा र अधिकार
तपाईं एक घर भाडा भने, तपाईं धेरै अधिकार छ. तपाईं सफा छ कि एक ठाउँमा बस्न सही छ, कुनै त्रुटिहरू छ, र गर्मी र पानी छ. अमेरिका मा, त्यहाँ एक घर धनी तपाईं विरुद्ध भेद गर्नु सक्दैन व्यवस्था छ. यो एक घर धनी किनभने तपाईंको दौड को तपाईंको भाडा आवेदन गर्न कुनै भन्न सक्दैन अर्थ, नस्ल, वा धर्म. कति मान्छे आफ्नो घर बस्न सकिन्छ र आफ्नो घर धनी तिमी के प्रदान गर्नु पर्छ बारेमा विभिन्न राज्य अमेरिका मा विशिष्ट व्यवस्था पनि छन्. Hud.gov आवास बारेमा एक शैक्षिक वेबसाइट. तपाईं सिक्न सक्नुहुन्छ आवास भेदभाव र भाडादार अधिकार आफ्नो राज्य मा.
एक पट्टे मा हस्ताक्षर
एक पट्टे एक लिखित दस्तावेज हो तपाईं बाँच्न ठाउँ भाडामा जब तपाईं साइन इन. पट्टे तिमी र घर धनी बीच एउटा सम्झौता हो, भाडा एकाइ को मालिक. पट्टे मा, तपाईं प्रत्येक महिना समय आफ्नो भाडामा र बिल भुक्तानी गर्न सहमत र घर धनी एक सुरक्षित र सेनेटरी प्रदान गर्न सहमत (कुनै त्रुटिहरू संग सफा) भाडा एकाइ.
तपाईं साइन अघि
तपाईं आफ्नो पट्टे साइन इन अघि, बनाउन घर धनी संग भाडा एकाइ मा हेर्न निश्चित. यदि त्यहाँ भङ्ग कुराहरू छन्, वा स्थान फोहोर छ भने, पट्टे त्यस लेख्न गर्न घर धनी सोध्न. यसरी तपाईंले पछि प्रमाण हुनेछ तपाईं केहि तोड भनेर होइन वा फोहोर बनाउन.
सुरक्षा जम्मा तिर्ने
जब तपाईं पहिलो सार्न, तपाईं एक सुरक्षा जम्मा भुक्तानी गर्न सक्छ. के तपाईं आफ्नो भाडामा तिर्न छैन वा तपाईंले भाडा एकाइ धेरै फोहोर बनाउन भने मामला मा बाहिर सार्न सम्म यो मुद्रा घर धनी द्वारा राखिएको छ र तिनीहरूले साफ गर्न तिर्न. तपाईं बाहिर सार्न तपाईं आफ्नो भाडामा तिर्न र घर सफा भने, त्यसपछि तपाईं आफ्नो जम्मा पैसा तपाईं फर्के प्राप्त गर्नुपर्छ. केही leases अर्डर आफ्नो जम्मा फिर्ता प्राप्त गर्न आफ्नो गलैँचा सफा गर्न आवश्यक. तपाईंलाई उत्प्रेरित गर्दा आफ्नो घर मा गलैँचा साफ थियो भने जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्. यदि यो साफ थिएन, लेखन मा राख्नका लागि घर धनी लागि अनुरोध तपाईं गलैँचा सफा छैन भनेर. तपाईं गलैँचा सफा छ भने, यसको सट्टा तपाईंले पैसा को एक कम्पनी धेरै तिर्न गलैँचा सफा गर्न भएको एक कम मूल्य को लागि एक मिसिन भाडामा सक्नुहुन्छ.
पट्टा को लम्बाइ
Leases महिना को एक निश्चित संख्या लागि हस्ताक्षर. सबैभन्दा leases छ महिना वा एक वर्षको लागि हो. तपाईं पनि महिना-को महिना एक पट्टा साइन इन गर्न सक्षम हुन सक्छ. यो के तपाईं कुनै पनि समय बाहिर सार्न सक्नुहुन्छ मतलब. तर, तपाईं अझै पनि साधारणतया घर धनी एक महिना बताउन अग्रिम सार्न भनेर हुनेछ र तपाईंले आफ्नो सम्झौताको अन्त मार्फत भाडामा लिन तिर्न पर्छ.
सबैभन्दा leases दिन को एक निश्चित संख्या दिन तपाईं आवश्यक हुनेछ’ तपाईं बाहिर सार्न अघि नोटिस. तपाईं आफ्नो भाडा बाहिर सार्न जाँदैछन् भने, तपाईं आफ्नो घर धनी बताउन तपाईं सार्दा गरिनेछ आवश्यक कति अगाडि दिन समय हेर्न आफ्नो पट्टा जाँच गर्न निश्चित हुन.
मेल र बिल
जब तपाईं बाँच्न ठाउँ पाउन, तपाईँलाई समय आफ्नो बिल भुक्तानी गर्न आवश्यक हुनेछ. तपाईं शायद मेल मा बिजुली लागि बिल र अन्य उपयोगिता प्राप्त हुनेछ.
भाडामा महिनाको पहिलो वा मा तपाईं पहिलो सारियो कि महिनाको दिन सामान्य कारण हो. सधैं एक चेक प्रयोग गरेर आफ्नो भाडामा भुक्तानी गर्न प्रयास, बरु नगद को. तपाईं भुक्तानी भन्ने कुराको प्रमाण छ कि सधैं एक रसिद लागि अनुरोध.
जहाँ आफ्नो मेलबक्स स्थित छ तपाईंको घर धनी सोध्न र नियमित तपाईंको मेल जाँच गर्न निश्चित हुन. तपाईं सार्न यदि हुलाक कार्यालय बाहिर फारम भर्न तपाईंलाई आवश्यक. जब तपाईं यसलाई भर्नका, आफ्नो मेल आफ्नो नयाँ ठेगानामा पठाइने.
सामान्यतया, तपाईं आफ्नो बिजुली सहित आफ्नो उपयोगिता भुक्तानी गर्न हुनेछ, प्राकृतिक ग्याँस वा तेल, पानी, वी / इन्टरनेट, टेलिफोन, रद्दीटोकरीमा, ढल, आदि. कहिलेकाहीं, केही वा सबै उपयोगिता आफ्नो भाडामा समावेश छन्, तर अधिकांश समय तपाईंले तिनीहरूलाई अलग तिर्न. तपाईं घरमा न्यानो लुगा आफ्नो गर्मी कम राखन र लगाएका गरेर आफ्नो उपयोगिता पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ, र रोशनी बन्द र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू अनप्लग गरेर तिनीहरूले आवश्यक छैनन् जब.
एक घर खरीद
एक घर खरीद शायद तपाईं कहिल्यै गर्नेछ सबै भन्दा ठूलो खरीद छ. तपाईं लागि कानुनी मुद्दा धेरै छन्, बैंक, र व्यक्ति लागि घर बिक्री. आवास को अमेरिकी विभाग र शहरी विकास छ आफ्नो पहिलो घर खरीद बारे ठूलो जानकारी र पहिलो-समय र कम आय घर खरिदकर्ताहरूको लागि कार्यक्रम.
तपाईं पाउन हेर्न सक्छन् homebuying कार्यक्रम तपाईं आफ्नो शहर वा राज्य मा एक घर किन्न सहयोग गर्न.
Smartasset.com तपाईं भाडामा लिन वा एक घर खरीद गर्ने निर्णय गर्न मदत गर्न राम्रो उपकरण छ. यो तपाईं एक घर किन्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं सिक्न मदत गर्न सक्छ.
यसलाई आफ्नो छिमेकी असल सम्बन्ध छ महत्त्वपूर्ण सधैं छ, जहाँ बस्नुहुन्छ. तर यो सम्बन्ध आफ्नो घर देशमा भन्दा फरक हुन सक्छ. जस्तै, तिम्रो देशमा, तपाईं दिन को कुनै पनि समय आफ्नो छिमेकीलाई भ्रमण हुन सक्छ. अमेरिकामा, तिनीहरूले मित्र वा छिमेकीको भ्रमण अघि मानिसहरू अक्सर कल. तपाईं पनि आफ्नो छिमेकी को आदर हुन प्रयास गर्नु पर्छ. धेरै अमेरिकी निजी सम्पत्ति रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विचार. तपाईं आफ्नो घर अगाडि आफ्नो यार्ड वा पार्क मा हिंड्न यदि तिनीहरूले यसलाई मन सक्छ.
तपाईं गर्दै धेरै हल्ला कसरी सजग हुनुपर्छ. बीच शान्त हुन प्रयास 8 p.m. र 8 a.m., संयुक्त राज्य अमेरिका मा आराम सामान्य समय.
तपाईं आफ्नो छिमेकी असल सम्बन्ध विकास भने, यो तपाईंको परिवारको लागि राम्रो हुन सक्छ. जब नयाँ छिमेकी सार्नु, तपाईं आफैलाई परिचय गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई व्यवहार को खानाको वा प्लेट ल्याउन.
तपाईं आफ्नो छिमेकी को एक एक समस्या भइरहेको छ भने, तिनीहरूलाई कुरा गर्न प्रयास गर्नुहोस् र अवस्था व्याख्या. जस्तै, कसैले राति चर्को भइरहेको छ भने, तिनीहरूलाई तरिकाले सोध्न किनभने छोराछोरीलाई सुतिरहेको छन् तिनीहरूले शान्त हुन सक्छ भने. तपाईं थप मद्दत गर्न आवश्यक छ भने तपाईं समस्याको बारेमा आफ्नो घर धनी बताउन र तिनीहरूलाई आफ्नो छिमेकीलाई कुरा अनुरोध गर्न सक्छ.